Kulankii Horumarka Soomaaliya ee sanad 2012 | Somalisan.com Home
Kulankii Horumarka Soomaaliya ee sanad 2012
1/1/2013 5:25:00 PM
Kulan Lagu qabtay magaalada Birmingham oo ay soo abaabuleyn qaar ka mid dhalinyarada iyo aqoonyahanada magalada Bristol ayaa maanta oo ay tarikhdu ahayd 30 December 2012 ayaa Looga hadlay Horumarka Soomaaliya laga sameeyay sanadkan dhamaadka ah ee 2012ka.
Waxaa kamid ahaa Horumarka laga hadlay dhinacyada :- Siyaasada, amaanka, Arimahabulshada qeybaheeda sida waxbarashada, caafimaadka, sportska iyo wiliba Fanka iyo Hiddaha. Waxaa leysku raacay in uu sanadkaan dhamaadka ah uu ahaa sanad aad iyo aad ugu wanaagsanaaa dadka Soomaalida meel kasta oo eey joogaan. 2012 wuxuu ahaa sanad eey dareemeen in ay leeyihiin dowlad Soomaaliyeed waana sanad ay qaranimada Soomaaliyeed dib u soo bidhaantay.
Amaanka Soomaaliya aad iyo aad ayuu u wanaagsanaaday gaar ahaan magaalada Muqdisho (inkastoo ay jiraan qaraxyo mar mar dhaca).. Horumarkan dhanka amaanka laga sameeyay ayaa waxaa la sheegay inay qeyb ween ka qaateen ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM. Intaa waxaa dheer in madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu door weyn ku lahaa sugida amaanka maadaama uu la yimid dhiirogelin aad u sareeysa.
Dhameestirkii road map ka iyo shirarkii kala duwanaa ee ka dhacay gudaha wadanka sida (Muqdisho, Gaalkacayo iyo Garoowe) iyo kuwii ka dhacay dallka dibadiisa iyana waxaa loo arkay mid wanaagsan maadaama ay soo afjartay nidaamkii kumeelgaarnimada ahaa isla markaana meesha ka saartay tuhunkii ahaa in Soomaaliya maxamiyad la galinaayo iyo warar kaloo kuturokuteen aan raad laheen ah.
Sanadkan sii dhamaanaya waxaa la ansixiyay dastuurka kumeelgaarka ah oo ay yeelanayso Jamhuuriyada Federlaaka Soomaaliya.
Soo xulistii xildhibaanada iyo afhayeenka baarlamaanka oo u dhacday si diimuquraadiyad ay ku dheehan tahay, ayaa ah waxa lagu xusuusan doono sanadka 2012 ka. Waxaa la soo doortay 275 xildhibaan ka tayo wanaagsan kuwii hore iyo afhayeen baarlamaan (Prof. Maxamed Cismaan Jawaari) aqoon dheer u leh howlaha sharci dejinta, asluub wanaagsan, wadaninim
Soo xulistii xildhibaanada iyo afhayeenka baarlamaanka oo u dhacday si diimuquraadiyad ay ku dheehan tahay, ayaa ah waxa lagu xusuusan doono sanadka 2012 ka. Waxaa la soo doortay 275 xildhibaan ka tayo wanaagsan kuwii hore iyo afhayeen baarlamaan (Prof. Maxamed Cismaan Jawaari) aqoon dheer u leh howlaha sharci dejinta, asluub wanaagsan, wadaninimona ay ka muuqato.
Sanadkan 2012 wuxuu noqday markii ugu horeeysay taariikhda Soomaalida ay is isu sharaxaan 24 murashax inay noqdaan madaxweynaha Jamhuuriyada Federlaaka Soomaaliya. Murashixiintaas oo badankooda ka kala yimid wadanka dibadiisa. Waxaana nasiib wanaag ah inuu ku guuleeysto Prof. Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa qof aanan ka bixin wadanka intii ay dagaalada ka socdeen, mashaariic badan oo isagu jiro kuwo horumarineed iyo kuwo waxbarasho ka hirgaliyay Soomaaliya. Guusha uu gaaray aad iyo aad ayaa loogu farxay.
Raysalwasaare Saacid iyo golihiisa wasiirada waa waxa aanan marnaba ka go,i doonin xusuusta shacabka Soomaaliyeed. Labada walxood oo sida gaarka ah u baahan in la xuso ayaa ah: laalida nidaamka 4.5 ka oo ahaa nidaaam ku dhisan cadaalad darro iyo doorka dumarka Soomaaliyeed. Raysalwasaare Saacid wuxuu soo dhisay xukuumad yar oo ka kooban 10 wasiir laguna saleeyay nidaam ah shan beelood oo siman (inkastoo ay tahay in Soomaaliya ay ka gudubto nidaamka ke saleeysan in beel beel wax lagu qebsado). Xukuumadan ayaa noqotay mid ay dumarka ku yeeshaan door muuqda maadaama la siiyay labo wasaaradood oo miisaan leh sida Wasaarada arimaha dibada oo loo magacaabay Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan iyo Dr.Maryam Qaasim oo loo magacaabay Wasiirka Wasaarada Hormarinta Adeega bulshada.
Ugu dambeyntii ayaa talooyin kala duwan loo jeediyay hay'adaha kala duwan ee dowladda soomaaliyeed waxaan Illahay Looga wada baryay in uu sanad 2013 uga dhiga sanad wanaagsan oo Horumarka iyo cadaalada la wada gaarsiyo dhamaan umadda soomaaliyeed Inshallah